Awel – Omar
Obbo lammaa magarsaa irratti shira haaraatu hojjatamaa jira
Obbo Lammaa Magarsaa irratti shira haaraatu hojjatamaa jira; inni caldhifnaan ofis Oromoos miidha
Akkan madda qabatamaa irraa dhagayetti kaleessa Lammaan Bilxiginnaa fudhachuuf waliif hin galle. Wanti tahe jaarsolii biyyaa walitti qabanii itti geessanii itti waywaachisan. Innis tole jedhee isaan waliin haasa’uu eegale. Waan badiifi dogongora jettu himi jedhaniin. Tarreessee himate. Warri PP waan ati jette hunda ni furra, Saganataa siyaasaafi caaseffamas waliin mari’annee sirreessina jedhanii waadaa galan. Yeroo kana jaarsoliin Lammaatti booyan. Lammaanis tole mari’annee sirreessuuf nan yaala jedhee waadaa gale.
kan ta’e kanuma. Garuu warri PP akka waan Lammaan Bilxiginnaa fudhateetti gabaasan. Wanti kana godhaniif 1) diddaa miseensaafi ummata irraa isaan gahe jalaa hafuura baafachuuf 2) Lammaa xawalwaallee fakkeessanii ummataan jibbisiisuufi.
Qabxiin lammataa tun xiyyeeffannoo barbaaddi. Lammaan PP ejjannoo cimaan keessaan mormee ummatattis himee amma deebi’ee yoo fudhate ummata keessatti ni shakkama. Sagatanaafi adeemsa Bilxiginnaa sirreessuu ammoo hin danda’u. Sagantaafi caaseffamni irratti waliigalame jedhamee boordii filannoo galee jira. Achii baasanii sirreessuuf yeroon filannoo waan dabruuf hin danda’amu. Fedhiin ilaalcha Lammaa fi sabboonummaa Oromoo hammachuus ooftota Bilxiginnaa bira hin jiru. Kanaafuu Lammaan yoo ejjannoo ofii jijjiree Bilxiginnaa ofiif fudhate malee Bilxiginnaa jijiiruuf hiree hin qabu. Yaada ofii jijjiree seenaan ammoo xawalwaallee jedhamee tuffatama, jibbama. Duula kan itti banu warruma Bilxiginnaati.
Kanaafuu Lammaan kabajaa mataa isaa jarri xiqqeessee ofitti isa qixxeessuu barbaadu tikfachuu fi kaayyoo qabsoo amanameef sanis dhugoomsuuf jecha saffisaan bahee ejjannoo isaa akkuma gaafa VOAtti bahee mormii dhageessisee san ammas ibsuun barbaachisaadha.
Posted byawel omar December 26, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Obbo lammaa magarsaa irratti shira haaraatu hojjatamaa jira
Aliwwa oromoo sadan
ALIIWWAN OROMOO SADAN
Ras Alii Warra Ejjuu 1819-1866
Mootii warra Ejjuu kan haadha isaa Giiftii Manan waliin Ejju irra dabree Abiisiiniyaa bulchaa turee dha. Ifatti amantii Kiristaanaa fudhateera jedhama, iccitiidhaan garuu Musliima jedhamee hamatama ture. Haatahu malee warri Abiisiiniyaa zamana bulchiinsa isaa fi kan Alii isaan dura turee beekkamtii dhowwatanii ‘Zemene Mesafint (Era of Lords)’ jedhanii moggaasan. Giddu galeessa bara 1850ootaa keessa kan ka’e Tewodroos bulchiinsa warra Alii cabsee Alii fi haadha isaas booji’ee salphise.
Iyyaasuu Mohammed Alii – 1913 -1916
Ilma mooticha Walloo Mohammad Alii kan booda kiristaanummaa fudhatee Mikaa’eel jedhameeti. Haati Iyyaasuu intala Miniliki. Minilik ilma dhiraa waan hin qabneef bara dhuma jireenya isaa keessa nama siree isaa dhaalchisu waan dhabeef akka seeraatti Iyyaasuu ilma intala isaaf dhaalchisuuf dirqame. Iyyaasuu Alii joollummaa isaa irraa qabee eega siree dhaalee booda amantiilee Kirstaanaa fi Islaamaa walitti dhiheessuuf hojjechuu eegale. Siree dhaaluun Iyyaasuu Alii kan durattuu yaaddoo jaratti tahee ture Amaarri Shawaa Iyyaasuu waan ittiin rukutanii karaa irraa maqsan argatan. ‘Amantii masaraa keenyaa jijjiiree kan warra isaa duriitti deebi’e, naamusa dhabe…’ jechuun waan baay’ee itti maxxasanii taphaa ala godhaniin. Durattuu akkamitti aangoon hidda keenya keessaa baha jechuun lolaa turan waan taheef Iyyaasuu dhiibanii, abbaa isaa kan Wallo irraa waraana bobbaasee birmateef dirree lolaa Sagalee irratti dhahan. Booda Raas Tafarii (Hayla Sillaasee) muudan. Iyyaasuu ALii cubbuu jaraatiin ajjeefamee karaatti hafe.
Abiyyi Ahmad Alii 1976 –
Zamana Oromoon wal quba qabuu fi waliin qabsoo mirga isaa godhu keessa ol ka’e. Hiree gaarii argate kanati fayyadamuun aangoo siyaaasaa Itoophiyaa qabate. Bara jireenya isaa keessatti mootummaa Tigree EPRDF jedhamu keessatti waan dabarseef muuxannoo achi keessatti kuufate qaba. Wayta warraaqsi ummata Oromoo sirna EPRDF buqqisuutti dhihaatu innii fi gareen isaa warraaqsa ummataatti makaman. Ebla 2, bara 2018 Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa tahuun moggaafame. Milkoomina isaaf qabsoon Qeerroon Oromoo godhe sababa guddaa ture. Akkasuma Abiyyi Alii sadarkaa kanaan gahuu irratti tarsiimoon jaala isaa Lammaa Magarsaa kan yeroo sanatti bulchaa Oromiyaa turee haalaan murteessaa akka tahe hayyoonni seenaa irratti walii galu. Abiyyi Alii maatii Musiimaa fi Kirstaana tahan keessaa waan dhalateef hariiroo hawaasota lamaanii jabeessuuf hojii milkaawaa akka hojjetetti beekama. Seenaa isaa keessatti hoggana Oromoo yeroo duraaf huccuu aadaa Oromoo masaraa mootummaa Itoophiyaa Shaggar seensise tahuun beekama. Seenaan Abiyyi Alii bifa kanaan eegale eessatti akka dhaabbatu seenaatu gara fuulduraaf barreessa.
Aliiwwan sadan wantoota wal fakkeessan:
Sadanuu maatii Alii jedhamu keessaa bahan. Sadanuu warra sirna mootoma gonfoo (monarchy) shaakaluu ture keessaa dhalatan. Sadanuu amantii lamaan (Islaamaa fi Kiristaana) walitti dhiheessanii laalu, hundaan walii galu. Sadanuu amantiidhaan Kiristaana yoo tahaniyyuu maatii Musliima irraa dhalachuu fi wal qixxummaa amantiif cichuu isaaniif qofa Habashoota biratti shakkamoo fi jibbamoo dha. Sadanuu warra aangoo mootummaa Itoophiyaa qabachuuf Oromoo keessaa carraan isaan daaw’attee dha. Sadanuu Oromoo waan tahaniif warra hidda Kaabaa harkaa haangoo fudhachuu fi biyyattii walitti qabanii bulchuun laaftuu itti hin taane. Alii inni boodarraa kufaatii Aliiwwan duraa lamaan irraa barumsa fudhachuu danda’a. Raas Alii fi Iyyaasuu Mohammed Alii Oromoo saba isaanii birmachiifachuu waan hanqataniif harka alagaatiin dhahaman. Barri isaan jiraatan sunis saniif rakkisaa ture. Abiyyi Ahmad Alii yoo itti fayyadame carraa guddaa qaba. Bara sabni isaa dammaqiinsaa fi tokkummaa jabaa qabu keessa ka’e waan taheef haala saba isaa hin mufachiifnetti sochoonaan seenaa Oromoo biyyattii sana keessatti barreessee darba. Yoo hunda gammachiisuuf rakkachuutti saba sadarkaa kanaan isa gahe xiyyeeffannoo dhorkate garuu fagoo deemuu hin danda’u.
Posted byawel omar December 22, 2019 December 22, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Aliwwa oromoo sadan
Ilma abbaa gadaati qeeqamuu hin qabu warra jedhu
Ilma Abbaa Gadaati Qeeqamuu Hin Qabu Warra Jedhu Saniif Deebii Gabaaba Qaba.
Dr. Abiy Ahmad ilma Oromooti. Kun dhugaadha. Eennullee haaluu hin dandayu. Oromummaa isaatin namni isa qeeqes hin jiru. Garuu haadhan Amaara. Kun dagatamuu hin qabu. Nu sanis qeeqaa hin jirru. Kan qeeqaa jirru ilaalcha fi Hammeenya isaati. Ilaalcha gaafa jennu, Ilaalcha Farra Oromummaa fi Ilaalcha Farra Sabboonummaa inni qabuudha.
Hammeenya gaafa jennummoo, Yaalii ajjechaa Hayyuu Oromoo Jawaar Muhammad irratti rawwaaterraa eegala, Warra Aangoo ofii dabarsee isaaf kenne Obbo Lammaa Magarsaa, Adde Tayyibaa Hasan fi k.k.f akka Rirmaatti nyaatee balleessuu isaa dabalata, Siidaa Haylasillaasee Gamtaa Afrikaatti akka ijaaramuuf shoora olaana taphachuu isaa hammata, Siidaa Minilik isa Birbirsa Gooroo jiru karaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetin halluu dibee babbareechuu, kan san hunda caalu Masaraa Mootummaa keessatti Siidaa Haylasillaasefi Minilik Doolara Miliyeenan Lakkahamuun Gogaa waggaa hedduuf turuun tolfatuus qabata. Kana jechuun Yakka Duguuggaa Sanyii Minilikif Haylasillaasen ummata biyya sanii irratti rawwaatan deeggaruu agarsiisa. Hammeenyi kanaa olii hin jiru. Inni biraammoo Gaafii Oromoon waggaa 140f wareegama itti kaffalaa ture awwaludha.
Hammeenyi namticha kanaa lakkahamee hin dhumu. Hammeenya kana osoo ijaan agarru akka waan hin arginiitti callisaa, innuu Oromoodha ilma abbaa gadaati warri nuun jedhan immoo Kaadrota PP warra dantaa garaa ofii malee dantaan ummata bal’aa hin yaaddessine.
Kaadreewwan PP dhageettuu? Ilma Abbaa Gadaati mitii Abbaa Gadaayyuu maa hin taane haqa ummataa jallifnaan ni qeeqama. Innu Oromoodha, nu yoo qeeqne alagaaf hulaa banna waan jedhu sanis dhiisaa. Goobanni Daacee, Fitawraarii Abbaa Malaa HabtaGorgis Dingdee fi Tukee Maammoo fa’as Oromoodha, Haylasillaasenuu Oromoo akka tayetu himama. Oromummaan dhaloota qofa osoo hin taane Ilaacha Oromummaa qabaachus dabalata. Biyyaaf Yaaduu Sabaaf Yaadus Hammata, Qajeeltoo Falaasama Sabichaa Gadaa beekanii ittiin masakamuu gaafata. Wal gorsanii wal qajeelchun qarummaadha. Badii irrattimmoo wal deeggaruun doofummaadha. Barreeffama isinitti dheeressuu kootif dhiifama.
Guyyaa Gaarii Qabaadhaa. Bunaaf Nagaa hin dhabinaa
Posted byawel omar December 17, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ilma abbaa gadaati qeeqamuu hin qabu warra jedhu
Asha birree fi faaxee anniyya
Posted byawel omar December 17, 2019 December 17, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Asha birree fi faaxee anniyya
Siyaasni Oromoo harka ‘elite’ keessaa ba’ee erga siyaasa uummataa ta’ee bubbulee jira, baroonni lakkaa’amaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa dhufee darbus paartiiwwan siyaasaa fi jaarmiyaalee Oromoo hunkuteessee daaraatti erga dabalaniin booda quufuu dadhabanii uummata bal’aa hiraaraa kan ba’aniif kanaafi. Uummatichatu ofuma isaa gama danda’u hundaan qabsaa’aa ta’e. Keessumatti Waxabajjii 1992 irraa kaasee ABO rukutamuu irraan kanka’e Oromoota siviilii, jaarsaa fi daa’imman dabalatee namoonni meeqa harka mootummaatiin akka miidhaman Oromiyaan halakkooftu (Isa kanaaf namni dhimmi kun oduu durii ykn jette jettee itti fakkaatu yoo jiraate gabaasa bara sana irraa kaasee wagga waggaadhaan ‘Oromia Support Group (OSG’) ragaa waliin maxxansee baasaa ture dubbisuu danda’a. Lakkoofsa Oromoota siviilii mootummaan sababa funaanee ajjeesaa ba’e ida’amasaa yoo ilaaltan nama rifaasisa. Warri miidhama kana irraa hafanis biyya keessaa fi ala tamsa’anii jiru). Kana kaasuunkoo hinbeektani jedhee miti, dhimma biraafan adeema. Keessumatti waggoota shanan darban keessa uummatni Oromoo bakka hooggansi biyyoolessaa tokkollee hinjirretti ofuma isaan abbaa qabsoo ta’ee akkamitti akka injifannoo gonfate agarree jirra. Abbaan qabsoo Oromoo uummatichuma mataa isaati. Hubadhaa, hooggansi hinbarbaachisu jedhaa hinjiru. Uummanni dhamaatii ofii isaatiin getii baasee waan fide garuu dagatamuu hinqabu. Abbaan qabsoo Oromoo uummata Oromoo matuma isaati.
Keessumatti bara kana uummatichumatu ‘politician’ ta’ee jira, isa kana immoo adeemsuma qabsoo Oromootu dhale. Kun siyaasa Oromoo bara ammaa kana keessaa isa guddaa fi qabsoo saboota biroo irraa kan adda isa taasisudha. Har’a dhugaan kun dagatamaa jira. Diinnis firris waluma qixa waan dagate fakkaata. Keessumatti mootummaan yaa’ii addaggee Abiy Ahmediin durfamu tasumaa kana dagatee jira. ‘Elite’ Oromoo yoon qabadhe, yoon sossobe ykn yoon sodaachise uummatichi calliseetuma jala deema jedhee yaada. Kan isaan kanaa yaada alii waan ta’eef nama hinbyaaddessu ta’a. Uummatichi akkamitti akka isa ilaalu irra deddeebi’ee agarsiisee jira, dubbateera. Abiy garuu Oromoo baay’ee tuffattee jirti. Sababiin tuffii kanaas waanuman dubbataa jiru kanadha. Obbo Lammaa dugda keessa waraanee humna waan dhowwaterf, hattoota OPDOs hannaa fi yakka isaan hojjetaniin sodaachisee mogolee buusee afaan waan qabsiiseef uummatichi homaa hinfidu jettee yaaddi. Isuma Habashaan gaaffii Oromoo kankaase ‘elite’ malee uummata Oromoo miti jettu sana jechuudha. Oromoo hinbeektu. ብልፅግናn (PP moo Piippii jedhan sun) Oromiyaa keessatti salphina uffataa jiraachuutu mul’ataa jira. Kaadireen OPDO osoo hinhafin namni hundi salphina itti uwwisaa jira. Inni kunis humna uummataa malee kan ‘elite’ akka hinta’in beekuun hinbadu.
Kan nama gaddisiisu ‘elite’n Oromoos, keessumattuu paartileen siyaasaa qooda uummatni Oromoo siyaasa keessatti qabu, bakka isaan hinjirretti humnaa fi ‘creativity’ ofiitiin shoora inni taphate, shoora mataa ofii taphachuu isaatiinis ‘politician’ ta’ee akka jiru badaa waan hubataa jiran hinfakkaatu. Akki isaan itti adeemuu barbaadanii fi wanti isaan fedhan hindinuu akkuma jirutti waan uummatichaaf liqimsamu se’u. Ililchee simatee badhaasee wayita inni geggeessus waanumti hundi ittitolee isaanitti fakkaata. Fakkeenyaaf, uummanni irra deddeebi’ee waan himataa jiru qaba, kan namni hundi beeku. Paartileen Oromoo warri dhugaan qabsaa’an bixxilamanii bakka kudhan taa’aanii gaafa argu uummatichi waan himate qaba. Hammatee jaalala itti agarsiisee, kaan farda badhaasee, kaan gaachanaa fi eeboo kenneefii, isa kaaniif immoo dombii guddaa hamma manaa ga’u tolchee irra teesisee akka mootummaatti ulfeessee ofittiqabee itti himate. Akkas jedheen, ana irraa dhalattanii bifakoo qabaadhaa, ana fakkaadhaa, dheerinni hojjaa fi bal’inni keessan hamma biyyakoo Oromiyaa habal’atu, Oromiyaa addaan hinciccinnee akka aannanii addaan hinciccitinaa, gabaabduu gad-tumee taatanii quucartanii dheerinakootti orma hinkofalchiisinaa, bal’inni garaa keessanii hindhiphatin, ulfina dhuunfaa lafa kaa’aa waa’ee Oromiyaa falaa, ana kabajaa kabaja ofitti horaa jedhee gorse. Paatileen kun asba’anii waliin dubbataa jirra jedhanii ololuu malee dhimma kana irratti homaa hojjechuu hindandeenye. Uummanni Oromoo tokko ta’aa jedhee waan iyyuuf beeka, hamma paartileen kun tilmaaman caalaa beeka. Bakka jarri kun hinjirretti qabsaa’aa ta’ee Wayyaanee wajjin kokkee walqabeera, bakka paartiin hooggansa kennu hinjirretti qabsaa’ee milkaa’eera. Isaan kanaanis gadtaa’aa, narraa usaa jechuus inuma danda’a. Paartleen Oromoo kun garuu uummaticha akkas isaan kabaje kana, kan utuu beekaa fi jabaa ta’er jiruu kabaja isaaniif useetuma jala deemaa jiru kana dhaga’aa hinjirani, nutu sicaalaa beekaa akka jechuu. Sadarkaan qabsoon Oromoo irra geessee jirtu akka uummatichi harka ‘elite’ keessatti burkutaa’u waan eeyyamuuf miti. Utuu dubbannuu dhimmi kun fakkeenya tokkittiidha, akka itti paartleen Oromoo fi uummatichi itti waljala darbaa jiran wantoonni agarsiisaa jiran hedduudha. Paartileen Oromoos ‘barcuma ulfinaa’ ofjala osoo baatanii bareedaadha. Yeroon garmalee fiigaa jira, diinotni Oromiyaa marti harka walqabatanii ititaa akka jiran argaa jirra. Teessannii salphina hin eeginaa, guyyaan itti hojii ija qabu hojjetan har’a, bor miti, utuu carraan jiruu. Carraan har’aa kun laayyootti hin uumamne, akka uumame kanatti waan ittifufu hinfakkaatu, isinis argaa jirtu. Waan uummatni jedhe hintuffatinaa.
Posted byawel omar December 17, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Siyaasni oromoo
Filannotti seenuun duratti waaye sirna
Posted byawel omar December 17, 2019 December 17, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Filannotti seenuun duratti waaye sirna
Partii badhadhina sadarka irra gahh
Paartin badhaadhinaa sadarkaa godinaatii hanga gandaatti akka ummanni fi miseensonni ODP durii fudhataniif leenjiftootaaf leenjin kennamee bobbaafamanis milkaahaa hin jiran
Ergaalen aanotaa hedduu irraa kallattii hundaan nu Qaqqabaa jiru …
“ Nuti kaayyof malee garaadhaf buluu erga dhiifnee bubbullee jirra. Kana yoo gochuu baannes kan walitti buunu qeerrodhaani. Qeerron eenyu akka ta’e warri “Badhaadhina” nutti erganis ni beeku. Wanta Lammaa magarsaatif hin galletu nuufis galuu dide. Lammaa wajjin waliif galaatii waan sirreeffamuu qabu sirreessaa nutti gadiin koottaa. Barri gubbaadhaa ajandaa nutti ergame fudhanne Qeerroo rasaasan ajjeesifnu darbeera. Amma bara ija bananne kanatti huccuu gurraachan ija nu hiitanii Naafxanyaatti nun gurgurtan. Qaamni olaanan paartii Bilxiginnaa yoo dhuguma dhuguma kaayyoo oromoof dhimmama ta’e barattoota oromoo naannoo amaaraatti akka hoolaa gorra’amaa jiraniif furmaata haa lamatu. Nuti qaama barattoota sanaati. Har’a yoo Bilxiginnaa fudhanne boru carraan ilma oromoo waanuma Yunivarsitiilee naannoo Amaaraa keessatti ta’aa jiruu kanadha.”
Kan jettu yoo ta’u ergaawwan ijoo keessaa cuunfinee isin biraan geenyetu kan armaan oliitti. Galtooma
Posted byawel omar December 16, 2019 December 16, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Partii badhadhina sadarka irra gahh
Namonni tokko tokko
~ by Inj Ayele Degaga
Namoonni tokko tokko hubannoo dhabuu irraa kan
ka’e ykn ergama PiPi fudhatanii
Jawar_Mohammed dhuunfaan dorgomuu qaba ykn
ammoo paartii kan ofii dhaabuu qaba jedhu. Jawar
kana booda dhuunfaan beekumtii ykn aangoo
barbaada deema amantii jedhu hin qabnu. Paartii
dhaabuu osoo barbaadee waggaa tokko dura yeroo
Qeerroon isa gaafatu hundeessa ture. Hardha
paartiin Oromoo dhugaan hundaa’an hundi Jawaariif
jaalala malee hammeenya hin qaban. Jawar ofitti
qabuu malee ofirraa dhiibuu hin barbaadan. Jabaa
ofitti qabu malee akkamiin ofirraa dhiibu? Jawar
paartii tokko keessa galuun dirqama. Paartii tokko
keessa galuun paartii kuun dadhabbiisuu jechuu
mitii. Jawar paartii tokko keessa galuun jechuun
tokkummaan paartilee Oromoo akka sibiilaa akka
jabaatu sababa ta’a. Qindoominni (coalition)
paartilee akka dhugoomu fedhii guddaa kan qabu
Jawaariidha. GHO akka hundaa’uu gaheen Jawar
laayyoo miti. Jawar ammaan booda institution
Oromoo cimsuu fi ijaaruu malee ofii qofa beekamtii
argachuuf fiiguurra hin jiru. Jawar paartilee Oromoo
irraa fagaatee qofa akka socho’u fedhii eenyuu akka
ta’e ifaan ifatti beekna. Warri huccuu gatee
maraachuutti jiru yaaddoo fi sodaa maalii akka ta’e
ni beekna. Abbaan fedhe huccuu gatee haa maraatu
malee Jawar waan yaade hin dhiisu. Paartii Oromoo
tokko keessa ni gala. Tokkummaan paartilee
Oromoo akka lafa qabatu ni hojjeta. Qindoominni
(coalition) paartilee Oromoo ni dhugooma.
Oromoon sagalee isaatiin nama barbaade filatee
aangoo dhugaa ni argata. Biyya ofiirratti abbaa ni
Posted byawel omar December 16, 2019 December 16, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Namonni tokko tokko
Dubbi pp obbo lammatu xumure
Dubbii PP obbo Lammaatu xumure. Dr. Abiy gubbaarraa gadi erguuf yaale. Garuu obbo Lammaan achumatti harkatti qabe. Amma obbo Lammaa bira gadi darbuu hin dandeenye. Ummatni obbo Lammaatti amaanaa kennate. Obbo Lammaan Dr. Abiy’tti amaanaa kenne. Dr. Abiy amaanaa isaa nyaachuu ammoo obbo Lammaan ifatti hime. Kana jechuun “amaanaa natti kennattan na harkaa nyaatee quba qabaadhaa” jechuudha. Gama biraatiin “PP’n deebii keessan deebisuuf hin deemu” jechuudha. Dubbiin asitti hudhamte. Amma akkamitti obbo Lammaa irra tarkaanfatanii Dr. Abiy amanan ree? Waa’een PP obbo Lammaaf galuu dhabee natti hin fakkaatu. Sirriitti galeef jedheen amana. Garuu waan Oromoo miidhu ta’uu hubate. Itti gaafatama seenaa jalaa bahuuf amma hime. Amaanaa ummataa nyaachuun isaaf hin danda’amne. Nama amaanaa nyaatuu waan hin ta’iniif ummatni isa amana jechuudha!
Posted byawel omar December 16, 2019 December 16, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Dubbi pp obbo lammatu xumure
Yaa’ii har’a TPLF Maqaleetti geggeessite kana silaa Gaaddisa Hoggansa Oromootu Oromiyaa keessatti waamuu qaba ture. Yaalii godhanii mootummaadhaan dhorkamuunuunis waan tokko ture. Rakkoo bajataa yoo tahe hirmaattotni bakka irraa dhufaniin baasii isaanii of danda’anii hirmaachuu danda’u. Wayyaaneen kaleesa mirga sabaa fi sablammootaa irratti olaantummaa ofii labsitee bitaa baate har’as abbaan imaanaa federaalizimii sabdaneessaa ana malee hin jiru jettee yeroo ummata Maqaleetti waamtee harka dhoofsifattu arguun nama saalfachiisa, nama gubas.
Jara keenya, hanga dandeenyu wal gorsina. Siyaasaan caalanii argamuu dha. Dorgoommii ulfaataa fi murteessaa keessa seennee jirra. Haalli karaa hundaan mul’atu hundi xiiqiidhaan akka mimmixaa gubee taa’uuf ka’uu kan nama dhowwu dha. Har’as warruma kaleessa dabaree dabaree gateettii keenyarra turetu dhagahamaa jira. Mooraan keenya godoo ibiddi keessaa dhaame fakkaata. Amaaraanis Tigireedhaanis ni caalamna taanaan numa warra qabsootti jirra jennutu rakkoo qaba. Giddu galeessa biyyaatti siyaasaan masaraa harka Amaaraatiin naanneffamaa jira. Humna federaalizimiif ammoo Tigraaytu ana malee wabiin hin jiru jedha. Masaraa abaaruun qofti dukkana keessaa nun baasu. Guyyaa filmaataa qofa taa’anii eeguunis abshaalummaa miti. Warri halagaa amma irraa duula eegalee jira. Numa qofatu ciisaa jira. Haalli kun daddaffiitti jijjiiramee sagaleen Oromoo giddu galeessa biyyaa raasuu eegaluu qaba. Ofirra dabarree sablammoota akka hirkootti nu laalaniif abdii tahuu qabna.
Posted byawel omar December 14, 2019 Posted inUncategorizedLeave a comment on Yaa’ii Tplf
Awel, Blog at WordPress.com.
Walloo Biyya Bareedinaa